Egwuregwu kachasị mma maka gam akporo | Gam akporosis
On Android e nwere ọtụtụ egwuregwu ibudata ma na-agbalị, na onye ọ bụla dị mma karịa ndị ọzọ. E nwere ụdị na edemede niile: ime ihe, ọgụ, atụmatụ na uche, maka ụmụaka, ndị toro eto, etemeete, ịgba ọsọ, ọgba tum tum, ọgụ na ịkwụsị ịgụta ọnụ. Enwekwara ma n'efu ma kwụọ ụgwọ, yana ọkụ ma ọ bụ arọ. Ka o sina dị, anyị na-anakọtakarị egwuregwu kacha mma na ngalaba nke ọ bụla, iji wetara gị ihe kachasị ụtọ, egwu ma budata na Storelọ Ahịa Play, ma ugbu a ọ bụ oge nke egwuregwu ọkụ.
Ọhụrụ a chịkọtara post anyị depụtara gị egwuregwu 5 kachasị mma maka gam akporo. Nke a raara nye ndị ọrụ nwere ekwentị nwere obere njedebe, ebe ọ bụ na ọtụtụ ụdị dị na mpaghara ahụ enweghị ike ịme ọfụma na-achọ egwuregwu dị egwu, yabụ ndị chọrọ obere ego bụ ndị na-akwado ngwaike nke smartphones.
N'okpuru ebe a, ị ga-ahụ usoro egwuregwu kacha mma. Ọ dị mma ịkọba, dị ka anyị na-eme mgbe niile, na onye ọ bụla ị ga-ahụ na post a ha bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile. Agbanyeghị, otu ma ọ bụ karịa nwere ike ịnwe sistemụ nkwụnye ego dị n’ime, nke ga-eme ka ịnweta ọdịnaya dị n’ime ha, yana inweta ihe nrite, ihe na ụgwọ ọrụ. N'otu aka ahụ, ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ ọ bụla, ọ bara uru ịmeghachi.
N'aka nke ozo, i ghaghi iburu n'uche nke ahu Egwuregwu ndị anyị depụtara n'okpuru ebe a nwere ike igwu ngwa ngwa na nwayọ site na ekwentị mkpirisi. na 1 ma ọ bụ 2 GB nke RAM na isi anọ ma ọ bụ asatọ na-arụ ọrụ na-enweghị oge elekere dị elu, na-enweghị ime ka ha chọọ oke, n'ihi etu ha si dị. N'otu oge ahụ, dị ka ihe mgbagha, ha nwekwara ike na-agba ọsọ site na mobiles na mma ngwaike na ndị ọzọ n'elu arụmọrụ, dị ka n'etiti na elu nso ndị.
1 PAKO rue mgbe ebighi ebi
3 Ebe a na-adọba ụgbọala 4
4 Lep Worldwa
5 Iwe mkpanaka 5: zombie
PAKO rue mgbe ebighi ebi
Anyị malitere mkpokọta a na nnukwu egwuregwu egwuregwu maka gam akporo, nke na-abụghị ihe ọzọ karịa PAKO ruo mgbe ebighi ebi, aha ị nwere ike ịnụ site n'aka mmadụ n'ihi na ọ bụ otu n'ime ndị kachasị ebudatara na ụlọ ahịa ahụ, yana ihe karịrị 5 nde nbudata na nnukwu 4.3 akara kpakpando na Storelọ Ahịa Play.
Isiokwu nke egwuregwu a dị mfe, mana na-emetụta oke. Anyị nwere ụgbọ ala ịkwọ ụgbọala na ebe a na-adọba ụgbọala na-enweghị njedebe, mana mba ... ọ bụrụ na ị chere na ị ga-adọba ya, ị ga-amata na ọ bụ ihe megidere ya. Must ga-akwọ ụgbọala n’akwụsịghị akwụsị, ọ bụghị n’efu, n’ihi na ndị uwe ojii na-eso gị n’azụ, ị ga-agbanarịrị! Ekwela ka ha gbochie gị; ọ bụrụ na i mee, ị ga-efu.
Ọ bụ ihe egwuregwu dị mfe ịchụ egwuregwu ebe ị ga-emerịrị ndị isi ahụ, nke na-achụ gị n'ụgbọ ala ha na ndị uwe ojii na-agagharị. Ha anaghị asọpụrụ okporo ụzọ na ihe ịrịba ama, yabụ, i kwesịghị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịpụ n'ọdụ ụgbọ ala na-adịghị agwụ agwụ. Dị ka ọnweghị ọnwu, ihe na-esiwanye ike, mana echegbula onwe gị, ị nwere nka ga-enyere gị aka izere ndị uwe ojii ma mebie ihe mgbochi. Ihe niile na-apụta mgbe ụda ụda na-eme ka ị na-ebugharị isi gị site n'akụkụ ruo n'akụkụ ma ọ bụ elu na ala.
Have nwere ọtụtụ ụgbọ ala ị nwere ike imeghe ka ị na-egwu egwu, yana ọnọdụ ogo asọmpi na rụzuru. Enwekwara ọtụtụ ihe nlere nke na-eme ka nsogbu ghara ịdị. Na mgbakwunye, inwere ike ịchọta ma jiri ihe dị ụkọ nke ga - enyere gị aka n'ọchịchọ gị ịgbanahụ ndị ọrụ mmanye iwu.
Ihe eserese nke egwuregwu ahụ dị mfe, mana emechara nke ọma, ịghara ịkọwa eserese. N'aka nke ya, otu n'ime ihe kachasị mma banyere egwuregwu a, nke ọ naghị adị ihe dịka 25 MB, bụ na ọ chọghị njikọ tontanetị ga-egwu, yabụ ị nwere ike ịkpọ ya n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla na-enweghị nsogbu ọ bụla. O doro anya na ọ bụ aha kwesịrị ịnwale.
Developer: Egwuregwu Osisi Men
O nwere ike iyi ihe siri ike ịchọta egwuregwu na-atọ ụtọ na Storelọ Ahịa Play nke na-erughị 25 MB, mana enwere, anyị nwere ihe akaebe banyere ya Noirmony, aha nke gafere 20 MB na ọ dabere na a kama peculiar monochromatic isiokwu, na a dịtụ gothic agwa.
Na egwuregwu a ị ga-emerịrị ka agwa ahụ wụpuo na akwụkwọ ojii, mana ọ bụghị n’enweghị izere ihe egwu dị na ọkwa niile na-adịghị agwụ agwụ. Na ntughari, ị gha achikọta kristal, nke ga - enyere gị aka ịmeghe ihe odide, nweta ihe ọhụrụ na - atọ ụtọ ma zụta ọtụtụ ihe, wee rute elu nke ihe niile na ụwa na - adịghị agwụ agwụ.
Na Noirmony ị nwere ike ịmeghe ma họrọ nke ọ bụla ihe kariri agwa iri ato di gi. Iji mee nke a, ị ga-agabiga ọkwa ma nweta ụgwọ ọrụ, nke anaghị adịcha mfe. Ihe dị iche iche na ịdị iche iche nke nnukwu elekere a na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ihe kachasị dị na ụlọ ahịa niile.
Developer: Ụlọ ihe nkiri Coisorama
Ebe a na-adọba ụgbọala 4
Dr. adọba ụgbọala 4 bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na-egwuri ịme anwansị egwuregwu na gam akporo Play Store. N'ime ihe karịrị nde 100 na nbudata na akara ngosi 4.2 nke dabere na ihe karịrị 720 nyocha na nyocha dị mma, egwuregwu a dị fechaa, na-atụle naanị 18MB, dị ka otu n'ime ụdị kachasị mma. Ọ dịkwa mma ịmara na ọ bụ aha na-achọghị njikọ Internetntanetị ka a kpọọ, n'ihi ya ị nwere ike ịkpọ ya n'ebe ọ bụla na n'oge ọ bụla, na-enweghị ihe ngọpụ.
Ọ bụrụ n’ịche na ụgbọala ndị na-adọba ụgbọala bụ ihe dị mfe ma dịkwa nfe, ị nwere ike ịbụ na ọ dị njọ. Na mbido ọ dị mfe, mana ọkwa ọ bụla na-adịwanye mgbagwoju anya ma nwayọ nwayọ. Enwere ihe mgbochi na oghere ndị ga-eme ka ọ siere gị ike, yabụ were nkà na omume mee ka ị ghara ịdị njọ ma gosipụta na ị bụ eze nke wiil ahụ na Dr. Parking 4.
Ọ bụrụ na ị nwere obere ohere nchekwa na gam akporo ekwentị gị, mana ka ịchọrọ inweta egwuregwu egwuregwu na-atọ ụtọ na nke na-atọ ụtọ, Lep's World bụ aha maka gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ onye egwuregwu egwuregwu na Mario, akụkọ Nintendo kachasị ewu ewu. . N’ezie, agbala anya; Ọ bụ egwuregwu dị iche na Mario, ọ bụ ezie na ọ sitere n'ike mmụọ nsọ ya, ya mere, ọ ga-echetara gị ya nke ukwuu.
Eledala ya anya. Naanị 30 MB dị arọ, Lep World nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 250 na Storelọ Ahịa Play naanị. Egwuregwu a na-enwu maka ike ya, nke ị ga-agabiga ọtụtụ ụwa, ọkwa na ndapụta iji ruo na njedebe nke onye ọ bụla ma nọgide na-egwu egwu.
Akaụntụ nwere ihe karịrị ogo 160, nke ọ bụla jiri ihe osise mara mma na ihe ngosi dị egwu. Bugharịa ma chịkwaa nnukwu goblin ma chịkọta mkpụrụ ego niile, mana ekwela ka ihe okike na ndị iro merie gị. Dodge ha ma tie ha aka iru ihe mgbaru ọsọ nke ọkwa ọ bụla. I nwekwara ike ịchọpụta ọtụtụ ihe odide na-adọrọ mmasị, n'etiti ha bụ ndị a: Blurgg dị ka Zombie, Long John dị ka Paireti, Super Sam dị ka Robot, Colleen dị ka nwa agbọghọ na ndị ọzọ.
Na ajụjụ, ị ga-agabiga 6 ụwa dị iche iche, nke ọ bụla nwere mgbagwoju anya karịa nke ọzọ ma nwee ọnọdụ dị iche iche na-adọrọ adọrọ n'ezie. E nwekwara ọtụtụ rụzuru nke ị ga-emerịrị, yana sistemu ogo. Na mgbakwunye na nke a, ọ dị mma ịmara na ụwa Lep anaghị achọ njikọ Internetntanetị iji kpọọ, nke mere ka ọ ka mma.
Iwe mkpanaka 5: zombie
Iji mechaa mkpokọkọta nke egwuregwu kacha mma maka egwuregwu gam akporo, anyị na-ewetara gị iwe nke mkpisi 5: zombie, egwuregwu ọgụ na ọgụ nke ị ga-abụ onye kachasị nka iji merie ndị iro gị na esemokwu na ngwa agha yana ọbụlagodi , n'ihi na enwere ọnọdụ Hulk nke ga - enyere gị aka iji ha. Enwere ọtụtụ egbe na egbe, yana ihe ndị ọzọ ị nwere ike ịkwadebe iji chee ìgwè ndị iro na-achọ igbochi gị ịgafe ụlọ na ọkwa ọ bụla.
Na egwuregwu a, ị ga - ahụ ihe niile site na ụgbọ elu gaa na robots, nke na - eme ka ihe na - agbanwe agbanwe na - atọ ọchị ma ọ gaghị amụ gị nke abụọ. Ọzọkwa, ị gaghị anọ naanị gị; I nwere ndị enyi atọ ga-eso gị gaa ebe ọ bụla ị gara ma nyere gị aka imeri ndị iro gị.
Ọnọdụ ebe ihe niile na-eme bụ n'otu obodo, nke otu ìgwè ndị na-eme ihe ọjọọ erutela ma tọọrọ ndị mmadụ ka ha mee nnwale ọjọọ. Ndị mmadụ ejiri mee ihe ahụ abanyela na zombies, naanị gị, site n'enyemaka nke ndị ibe gị, nwere ike imeri ha, iji weghachite ihe niile na nkịtị.
Egwuregwu a nwere a obi umeala ibu nke banyere 40 MB, nke na-abụghị ihe mgbochi maka ewu ewu ya nke dabere na ihe karịrị 100 nde nbudata.
Egwuregwu ụgbọ mmiri kacha mma nke 5 maka gam akporo